Setịpụ Ntụ Anya na Nnabata Nnabata | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 22, 2009 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Dịka onye na-azụ ahịa, ị nwere ike ịdabere n'ọtụtụ ngwa na ngwa ndị ọzọ iji mee ka mkpọsa gị dịrị ndụ.
Edeela m tupu oge m isetịpụ atụmanya na ndị ahịa gị na - eme ka afọ ojuju ndị ahịaEnwekwara ụzọ ị ga - esi nyere aka mee ka afọ ojuju gị - - mepụta nkwekọrịta nnabata iji dozie mmekọrịta gị na ndị ọzọ.
Nkwekọrịta nnabata setịpụrụ ụfọdụ iwu egwuregwu maka ndị na-ere ahịa ị na-arụ ọrụ tupu ịmalite. Nkwekọrịta nnabata nwere ihe ndị dị ka:
Onye nwere ihe ọgụgụ isi na oru ngo.
Onye nwere ihe onwunwe (eserese, koodu, wdg)
Ma igbu oge ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ na ọ bụghị ma ọ bụrụ na a rụghị ya ma ọ bụrụ na arụbeghị ọrụ n'ime oge enyere aka.
Mgbe na otu aga esi nyefee akụrụngwa na mmekọrịta ahụ ga na ndịda.
Ma ndị ọzọ nwere ike ịnyefe ọrụ ahụ ma rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Ma onye nke atọ nwere ike ịkwalite ọrụ ha na-arụ.
Ikekwe, ị nwere ụfọdụ mmasị na ihe na-adịghị amasị gị mgbe gị na ndị na-ere ahịa na-arụkọ ọrụ, oge a kara aka, akara ejiji, akwụkwọ, ụdị, wdg. ụzọ. Aga m akwado ha!
Dị ka nkwekọrịta ọrụ na ndị ọrụ gị ga-ezere esemokwu na ndị ọrụ, nkwekọrịta nnabata nwere ike izere nsogbu na ndị na-ere ahịa na ihe ndị ọzọ.
Tags: pịa nkesaChọọ Marketing
Doug, ina agu akwukwo oru ngo? Ugbu a, egbula blog echi gbasara ọrụ ọhụụ ma ọ bụ na m ga-ama na ị bụ. Ihe ị na-ekwu bụ eziokwu na onye ọ bụla nwere ezigbo njikwa njikwa ọrụ ga-amata nke a.
Ọ dị mfe ịme, mana ọ bụghị. Karịsịa mgbe ọrụ ahụ akọwaghị nke ọma na nsonaazụ chọrọ.
Ahụla m nnukwu nsogbu dị ka ị na-ekwu maka ebe a na eserese ọkachasị. Mgbe emezichara ha ma gbanwee ha, kedụ onye nwe ha? Ikpebi nke a dị ka ọrụ na-agwụ ike mana ọ nwere ike idozi nsogbu nsogbu mgbe emechara.
Ezi ọkwa, mana tinye akwụkwọ PM! :)
Mba, abughi m - mana m na-eche ọtụtụ ihe banyere ihe m na-ede blọgụ gbasara afọ ole na ole gara aga ma echeghị m na m etinyela oge dị ukwuu na atụmatụ na idu ndú dịka m nwere na nwere oke nkọwa.
Nakwa, na launching nke ọzọ mmalite m na-arụ ọrụ na (Usoro Koi), Anyị chọrọ iji hụ na ọ bụla dollar nọrọ nwere oké nloghachi na ya. Ka m nọgidere na-arụ ọrụ ahụ, aga m aga n'ihu ịkekọrịta ụdị ndụmọdụ a.
Aga m agbali ịnọgide na-agwakọta ya n'etiti nnukwu na micro, tho!
Daalụ nke ukwuu maka nzaghachi!